Thunar waxay yeelan doontaa baarkooda! | Laga soo bilaabo Linux
Rayonant | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Aplicaciones, GNU / Linux, Noticias
Waa hagaag, sida ay tahay, waxaan hadda ka helay liistada xubinta-devel oo waxaan ku xaqiijiyay barta Xfce. Nick sharfe gudaha G + yaa masuulka ka ahaa suurtogalinta:
«Adigoon sii dheerayn: Tabsyada Thunar. Mararka qaarkood il-furan ayaa sidoo kale dhageysata isticmaaleyaasha iyadoon ku heshiin isbedelka naftaada ;-). »
Waxa loo tarjumay kuwa aan si fiican ula qabsan Ingiriisiga waxay noqon doonaan:
«Iyadoo aan la sii dheerayn: Baarkooda indhaha Thunar. Mararka qaar ilo furan ayaa sidoo kale dhagaysta isticmaaleyaasha iyagoon oggolaan isbedelka naftaada. "
Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay warka, kaliya maahan in lagu soo daro howlaha cusub (oo dadka isticmaala Thunar ay filayeen waqti dheer) laakiin sidoo kale sababta oo ah isbeddelka ku yimid aragtida horumariyeyaasha Xfce, maxaa yeelay dhar badan ayaa jiray Hore ayaan uga jaray mowduucan fagaaraha iyo meelo kale oo badan jawaabtuna marwalba waxay noqotey maya maya suurta galna ma aha heshiisyo dhex dhexaad ah, anigoo ku doodaya in laba daaqadood oo is barbar socda had iyo jeer loo isticmaali karo in lagu bixiyo shaqadan.
Ma garanayo haddii loogu dari doono xirmo kor u qaadis ah, in kastoo aan ogahay in nooca git-ka loo soo ururin karo si gooni ah iyadoo la raacayo ku-tiirsanaanta Exo 0.9.0, Gtk 2.24 iyo Glib 2.30. Liiska boostada ee xubuntu devel waxaa la sheegay inuu u imaan doono Xfce 4.12 waxaana la shaaciyay in maadama nooca 1.5.1 ee Thunar horeyba loo heli karo laakiin waxaan u maleynayaa inaysan waqti dheer qaadan doonin inay u muuqato inay soo xirxireen dhinacyada saddexaad qaybinta kala duwan! :)
Xiriirinta boostada ee Xfce forum
Isku xirka daabacaadda G +
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Thunar waxay yeelan doontaa baarkooda!
Akhbaar wanaagsan, adeegsiga tabka heer shaqsiyeed had iyo jeer way ii ahayd wax aad u jaban aniga oo adeegsade Thunar ah waan ku faraxsanahay =)…
Ku jawaab DMoZ
waxa kaliya ee aan u baahanahay waa inaan helno raadinta isku dhafan maalin maalmaha ka mid ah sida nautilus oo kale
Hagaag, mashiinka raadinta wuxuu horey usii maray kalluunka kalluunka wuxuuna leeyahay ficil caado ah oo gujinaya midigta u yeeraya arjiga, aniga ahaanna waa igu filan tahay, haddii aadan xiiseyneyn inaad rakibato codsi dheeri ah waxaad sameyn kartaa makiinad raadin adoo isticmaalaya xaragada https://blog.desdelinux.net/creando-un-buscador-de-ficheros-para-thunar-con-zenity/
Haa, laakiin natiijooyinka raadinta ma sameyn kartid waxqabadyo, sida inaad tirtirto tusaale ahaan
wax aad ku awoodid nautilus
WTF !!! Sababtoo ah hadda? Aad ayaan ugu faraxsanahay KDE .. ¬¬
Sikastaba, war aad ufiican, wax Xfce ku caashaqay muddo dheer sugayeen.
Ha jirrabin ... waa inaad noqotaa mid xoog badan! haha.
hahaha nin adiga kugu dhaca inaad u gudubto dhinaca mugdiga, deegaanka Qt xD
War cajiib ah, hada waxaan ku isticmaali karaa Thunar raaxo ^ _ ^
Ku jawaab socrates_xD
Daahay. Waan ku qanacsanahay SpaceFM ex .. marka laga reebo marin u helka kombiyuutarada shabakada, snif.
Waan baqayaa, maxaa yeelay inta badan ma jecli isbeddelada, laakiin haye. Laakiin wali ma keeneysaa tabskii ay ku keentay asal ahaan? Waxaan ula jeedaa kuwa soo baxa markaad Ver garaacdo
Anigu waxaan ahay isticmaale Thunar runtiina waa inay tahay wax aan waliba filayay.
Waxaan rabaa inaan soo dejiyo oo aan soo ururiyo (Waxaan u isticmaali doonaa saldhigga rasmiga ah ee 'PKGBUILD' saldhig ahaan)
Uma baahni, xirmada mar hore ayaa la galiyay AUR: p
Waan ku faraxsanahay inaan maqlo warka markaan aad ugu firfircoon ahay XFCE
Anigu aad ayaan u fududahay adeegsiga feylka feylasha, waxaan ka shakisanahay inaan isticmaali doono tab marka ay yimaadaan Thunar maadaama aanan u isticmaalin daalacayaasha kale ee ikhtiyaar u leh, laakiin ugu yaraan waxaa jiri doonta ikhtiyaarka Thunar 😀
War wanaagsan. Karbaashyo ayaa ahaa waxa kaliya ee ka maqnaa samirkii. In ka yar in ay aakhirkii beddeleen maskaxdooda. Ma aanan jeclayn maareeyayaasha kale ee feylka sida ugu badan. Dhadhankeyga, marka la eego dayax-gacmeedkan ayaa qumman. 🙂
Waa hagaag, ma haysatid marmarsiinyo aad ugu laabanto XFCE, waan ku sugeynaa.
Tani waxay ku sii jirtaa KDE hahahaha, KOrganizer-kaas ... KMail, dhammaan is-dhexgalkaas laguma gaadhin deegaan kale LOL!
Waan arki doonnaa, waan arki doonnaa ..., ha u gabyin guusha waqtiga ka hor, oo meeshii uu dambasku ka jiray ay hadhaysaa !!.
Hahaha, ka tag, marka aad wax yar filato, waxaad markale igu arki doontaa Xfce hahaha
Wax dawo ah ma lihid. Marka hore KZKG ^ Gaara wuxuu noqday taageere Debian ah hadana elav waa taageere KDE ah. Maxaa xigi doona? Ma waxaan ahay taageere Apple ah? Hadday taasi dhacdo dharbaaxo fiican madaxa iga sii, fadlan. 🙂
Hahahaha Maxaan marwalba u idhaahdaa wax la mid ah? Waxaan ahaa isticmaale KDE 3.X
Ikhtiyaar kale oo adeegsadayaasha XFCE4 ay muddo dheer codsanayeen ayaa ah tifaftiraha liiska dalabyada.
Hal mar ayaa jirtay laakiin sababo jira awgood laguma darin.
Taas waxaad u isticmaali kartaa Alacarte ama LXmenu.
Xfce ayaa igu kalifay aniga oo adeegsade dayaxeed waxaan u arkaa war fiican.
Aad u fiican, hadda waxaad u baahan tahay oo keliya inaad la qabsato xawaaraha pcmanFM si aad u wanaagsan.
Weli, maaddaama XFCE ay tahay jawiga aan ugu jeclahay, aad bay iigu faraxsan tahay.
Hadda oo aan ka fikiro, [mowduuca] way fiicnaan lahayd in la helo habka faallooyinka, marka lagu daro OS iyo biraawsarka, ay sidoo kale u aqoonsan doonaan deegaanka. Tusaale ahaan, waxay kaliya kufilan laheyd in lagu daro magaca kujira «Agent User», sida XFCE 4.10, ama wax la mid ah. Runtu waxay tahay inaanan wax fikrad ah ka haysan arintaan 😉
Aragti ahaan haa, laakiin waxaan u maleynayaa inay aad u badan tahay mar hore haha.
Nooc dhexdhexaad ah dijo
+1000 !! Waxaan u maleynayaa isku mid .. hehe ..
Kajawaabida nooca loo yaqaan 'Moderate Versionitis'
oo waxaan la qabsan jiray spaceFM, waxaan isticmaali jiray xfce ilaa iyo markii aan isticmaalayay arch, laakiin maan eegin thunar on my desktop mudo bilo ah, waa wax aad u wanaagsan inay leedahay tabsyadaas, laakiin isbarbar dhiga haba yaraatee malaha spaceFM's tabs 😛 (gebi ahaanba fikirka shakhsiga ah iyo shaqaalaha, fadlan ha i dilin!)
Waxaan u maleynayaa inay isku mid tahay, pcmanFM (iyo kordhinta spaceFM ee aan tijaabinayo) waxay muujiyeen inay wax badan ka qaban karaan qorrax dhaca laakiin dhaqso badan, in kastoo dabcan, Thunar ay ka xasilloon tahay.
In kasta oo XFCE uu yahay midka aan ugu jeclahay, feker ahaanteyda waxay aad diiradda u saareen xasilloonida oo ay ilaaween inay wax cusub ikhtiraacaan.
UGU DANBAYN waxay siisay cududooda si ay u maroojiso. Waxaan ku xasuustaa fagaarayaasha kale in markii hal DARE la yiraahdo Thunar ha lahaado tabs (tabs) adduunka oo dhan baa ku dhacay isaga. Iyo waxa ugu xun ayaa ah in qofna uusan sheegin sabab macquul ah oo ay tahay inaysan lahayn.
Laakiin hey, waan sugi doonaa si aan u aragno sida ay u dhaqanto. Waxaan si gaar ah u isticmaalayaa CAJA (oo ku taal XFCE) wayna fiicantahay.
Kaalay, «Mighty Thunar» ayaa noogu yimaada indhashareer yar oo qaabka PcManFm ah ... war weyn laakiin waxay u baahan yihiin wax ka badan baarkooda yar iyo ikhtiyaarrada qaabeynta si ay iiga saaraan xodigayga LXDE
Waxay ahayd maalmo tan iyo markii aan XFCE u beddelay LXDE kaliya si aan u tijaabiyo, maalin walbana waan ka sii jeclahay 🙂
waa war fiican 😀
uh, tan iyo markii aan tirtiray xfce
Sababta ay u tixraaceen ee ah inaysan ku dhex milmayn shaqeynta tabka 'Thunar' maxaa yeelay waxay ku dartay "kakanaanta koodhka". Maaddaama aanan ahayn barnaamij-bixiye ama aanan eegin koodhka ilaha, ma xaqiijin karo mana diidi karo.
Isbeddelkan habdhaqanka ah ee Nick Schermer waa mid xiiso leh maxaa yeelay wuxuu ka mid ahaa kuwa sida aadka ah uga soo horjeeday ee fulinayay isbeddelkan. Waxaan la yaabanahay haddii ay wax ka leedahay xaqiiqda ah in nooca 4.12 uu yahay nooc ka mid ah "diyaarinta" in loo geeyo GTK3. Waa suurtagal in nooca GTK ee noocan ah shaqeynta ay fududahay in lagu daro.
Dhinaca kale, haddii aad nafsaddaada u hurto inaad u wareejiso faylasha hal buug oo aad u wareejiso mid kale »gacanta» iyo marar badan, isticmaalka tabsku waa mid aad u raaxo leh.
Akhbaar aad u fiican 🙂 Waxaan doorbidi lahaa inay iyagu ahaayeen goleyaal (2 waxba ma badna…), laakiin tabuhu waa hagaagsan yihiin 🙂
In ka badan tabs, waxa aan ku seegay Thunar waa guddi kala qaybsan oo aan u adeegsaday Nautilus markii aan riixayay F3.
War cusub kuweena isticmaala xfce ^. ^
Aperture Linux: Qeybinta sawir qaadayaasha
Ururinta saxiixyada si loo hagaajiyo wadayaasha AMD